Qalabka wax lagu dhejiyo, Mawjadda Carada, Ubax lagu qurxiyo Qoryaha - Xushmee
Iyada oo Diirad la saarayo Tayo sare, gaarsiin deg deg ah, waxaad u qalantaa tan ugu fiican.
Bacda dahabka ee afka
Naftaada isku dir, saaxiibada dir, dad badan ha wada qurux badnaadaan.
Gacan lagu sameeyay, muujinta qalbiga, risiqa wanaagga.
Qaababka gacanta lagu xardhay waa isku dhegan yihiin iyo wax is dul saaran, midab dhalaalaya, jilicsan oo qurux badan, qolka qurxinta oo soconaya, qurxinta jilicsan ku hayso waqti kasta iyo meel kasta, munaasabad kasta waxay leedahay iftiin u gaar ah
Dhammaan xulashooyinkaaga ayaa ku jira halkan. Waxaan leenahay shaashad saddex-geesood ah, kiisaska barkinta, muraayadaha, boorsooyinka, qalabka timaha, silsilado, kaatunno, hilqado, dambasyo, maaskaro, marooyin, dun xardhan iyo qalab la dhigay. Tayo sare, gaarsiin deg deg ah, waxaad u qalantaa tan ugu fiican.
Daabac Customized Set DIY Handmade tolidda C ...
CHERISH, oo la aasaasay 1995, waxay ku taalaa Yiwu, Shiinaha, caasimada badeecooyinka yaryar ee adduunka. CHERISH waa soo saare xirfadlayaal ah oo ku takhasusay naqshadeynta, soo saarista iyo suuqgeynta alaabada farsamada gacanta ee DIY ah 20-kii sano ee la soo dhaafay, iyada oo shirkadda ay leedahay qaabeyn xoog leh, horumarin, karti hal-abuur leh, abuurista warshad DIY iskutallaab ah si loo siiyo dhowr faa iidooyin ah. Astaamaha shirkadda ee hadda jira: Ailuo, Aiyouwei, CHERISH, iskutallaab-dhejis, rinjiyeyn dheeman, xirmo, xardho dhowr badeecooyin waaweyn oo taxane ah ayaa ku fadhiya booska suuqa. In ka badan 2000 oo dukaanno magac leh oo dalka ku baahsan, ayaa warshaduhu aqoonsadeen hoggaan. Kusoo dhawow CHERISH.
LA XIRIIR JACAYLKA KALE EE MATCHA